Uyifumana njani i-visa eNorway? - ALinks
Ukucwangcisa uhambo oluya eNorway, ke kwinyathelo lokuqala, kuya kufuneka ufake isicelo sevisa. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeeVisa onokuzisebenzisa. Uhlobo lwevisa oyifunayo luxhomekeke kwinjongo yotyelelo okanye yokuhambela eNorway. Injongo yakho yokuhamba ingaba luhambo lweholide, uhambo lweshishini, okanye ukufunda. Kukho uhlobo olwahlukileyo lwevisa elifunekayo kutyelelo olongezelelweyo. Kuya kufuneka ufake isicelo seNorway Schengen Visa, ngokweemfuno zakho zokuhamba.
Ipaspoti: Yinto ebalulekileyo oyifunayo kwisicelo sevisa. Qinisekisa ukuba ipaspoti yakho yeyentsusa esemthethweni kubambiso lweenyanga ezintathu ubuncinci ukusuka kumhla wokubuya kwakho Kuza kukunceda ukuba unencwadana yakho yokundwendwela efotelweyo ukuze uyingenise kunye nefom yesicelo. Nceda ukhumbule ukuba incwadana yakho yokundwendwela kufuneka ibe namaphepha amabini angenanto.
Umfanekiso wePasipoti: Qiniseka ukuba unefoto yobungakanani bepaspoti yamva nje. Ifoto yinxalenye ebalulekileyo ye-visa, iyenza icace kwaye kufuneka ibe nemvelaphi emhlophe.
Ifomu yokufaka isicelo: Kwinyathelo lokuqala, kufuneka ugcwalise iphetshana lesicelo ngokupheleleyo. Ungasebenzisa nayiphi na indlela yokugcwalisa ifom kwi-intanethi okanye ufumane ikopi yayo. Apha ungafumana ifomu yokufaka isicelo.
UkuHanjiswa kweNdiza: Kufuneka ufumane itikiti lakho lokuhamba kunye nokubuya uqinisekisiwe. Kuya kufuneka ufumane amatikiti akho abekelwe konke ukungena nokuphuma ngaphambi kokufaka isicelo se-visa.
I-inshurensi yokuhamba: Isiqinisekiso se-inshurensi sokuba sogubungela malunga ne-40,000 €. Le inshurensi kufuneka isebenziseke kulo lonke elaseNorway nakwindawo yeSchengen.
Iinkcukacha zoSapho: Kufuneka ucacise iinkcukacha zosapho lwakho ngokupheleleyo. Ezi nkcukacha zibandakanya imeko yakho yomtshato, iinkcukacha zomntwana kunye nezinye iinkcukacha ezifunekayo. Zonke ezi nkcukacha zinobungqina ziyafuneka (njengesiqinisekiso somtshato, isatifikethi sokubeleka).
Kukho ezinye izinto ezifunekayo nakwimeko ezahlukeneyo.
Isiteyitimenti sebhanki kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo
Akukho siqinisekiso sokuchasa kumqeshi
Ubungqina bomvuzo wakho okanye ukubuyisa Irhafu yengeniso (ITR)
Ikopi yelayisensi yakho yeshishini
Isiteyitimenti seBhanki seakhawunti yakho yebhanki yangoku kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo
INgeniso yeRhafu yeNgeniso (i-ITR)
Shiya incwadi yemvume evela esikolweni okanye eyunivesithi
Ukuba uthathe umhlala-phantsi:
Isiteyitimenti somhlala phantsi seenyanga ezintandathu ezidlulileyo
Ubungqina bemali engenileyo efunyenwe kwipropathi kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
*PHAWULA: Ifom yesicelo kufuneka isayinwe. Onke amaxwebhu anyanzelekileyo achaziweyo (afanelekileyo) kufuneka ancamathele kwisicelo. Kuya kufuneka ungenise la maxwebhu kumzi wozakuzo / wommeli okufuphi.
Kuya kufuneka ungenise amanye amaxwebhu ngaphandle kwalawo achaziweyo. La maxwebhu aya kuxhomekeka kuhlobo lwevisa oyifunayo. Ungajonga amaxwebhu ongezelelweyo afunekayo Apha.
I-visa yaseNorway yabatyeleli yamaIndiya
I-visa yendwendwe ikuvumela ukuba uhlale kwindawo yaseSchengen ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90. Ngexesha leentsuku ezili-180 eNorway okanye kwamanye amazwe.
AmaNdiya, amaBhutan, kunye nabemi baseNepal kufuneka bafake isicelo sokundwendwela eNorway naseSchengen undwendwe.
Masithi uceba ukutyelela ngaphezulu kwelizwe elinye laseSchengen kuhambo olunye. Okanye ukuba ucwangcisa iihambo ezininzi ezahlukileyo kwinyanga ezimbini. Kuya kufuneka ungenise isicelo sakho kwindlu yozakuzo yelizwe. Yeyiphi eyona ndawo uya kuyo ngokusekwe kubude bokuhlala kwakho okanye injongo yokuhlala?
Isicwangciso sakho sityelela amazwe aliqela aseSchengen, kwaye eyona ndawo iphambili ayinakuchazwa.
Kuya kufuneka ungenise isicelo sakho kwindlu yozakuzo yelizwe. Okanye i-consulate, eyona ndawo yokuqala yokungena kwindawo yaseSchengen.
INorway iqhuba izicelo zeVisa eNepal egameni leIceland. Ukuba uhambela e-Iceland. Kuya kufuneka ulandele inkqubo efanayo nokufaka isicelo sokundwendwela eNorway ukufaka isicelo kwisiqithi semvume yokuhlala.
Nceda uqhagamshelane nalo ICandelo loMlawuli waseIceland.
INorway ayiziphathi iimvume zokuhlala egameni labo.
Egameni leSweden, iDenmark, iFinland, neIceland, iNorway ilawula izicelo zevisa. Masithi uya kwelinye lala mazwe. Kuya kufuneka ulandele inkqubo efanayo nokuba ubusebenzisa i-visa yaseNorway.
Abanini bamapasi bokundwendwela baseIndiya:
Ngubani ohamba ngokusemthethweni ukuya eNorway akhululwa kwii-visa.
Nceda uqaphele ukuba ngexesha eliphezulu, ixesha lokuqhubekeka kwetyala linokuthatha ukuya kwiintsuku zokusebenza ezingama-21.
Ngaphambi kokuba ufake isicelo seVisa yaseNorway
Kuya kufuneka ufake isicelo kwangaphambili. Ngokubanzi, kungadlulanga iintsuku ezili-15 ngaphambi kokuba ucwangcise ukuhamba, ngenxa yamaxwebhu ekhuriya kwamanye amazwe. Sincoma ukuba usebenzise ubuncinci iiveki ezine ngaphambi kokuba uhambe
Isicelo sakho singeniswa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintandathu phambi kokunduluka kwakho okucwangcisiweyo. Siza kucebisa ukuba ungenise kubahambi ngolwandle kwiinyanga ezilithoba ngaphambili.
Sicebisa ukuba ungathengi itikiti lakho de kube kukhutshwe i-visa.
Kuya kufuneka isicelo sakho sibhaliswe kwi-intanethi. Phambi kokuba unikezele ngamaxwebhu afunekayo.
Uya kucelwa ukuba ubonelele ngeminwe. Akukho sidingo ukuba iminwe yakho ithathiwe kwiinyanga ezingama-59 ezidlulileyo.
Ukufaka isicelo sephepha-mvume elivela eIndiya. Kuya kufuneka ubengummi waseIndiya, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, okanye Maldives. Okanye kufuneka uhlale ngokusemthethweni kwelinye lala mazwe.
Masithi awuhlali eIndiya, eMaldives, eBhutan, eNepal, okanye eSri Lanka. Kuya kufuneka ubonelele ngesizathu sokufaka isicelo seIndiya.
Masithi nibabini okanye nangaphezulu abantu abahamba eNorway njengabakhenkethi. Ukugcina ixesha, kucetyiswa kakhulu ukuba ufake isicelo njengeqela.
Ungabhalisa njani njengeqela njengevisa?
Uninzi lwabantu abali-16 banokubhalisa izicelo ngexesha. Kwi Isango laseNorway lesango phantsi kwe "viza qela."
Khumbula ukuzisa onke amaxwebhu akhankanywe kuluhlu lokukhangela. Unokufumana uluhlu lokutshekisha kwiphepha lasekhaya loZakuzo.
Gcina ixesha ngokuqeshwa kweqela kwiVFS!
Unokuziva ukhululekile ukunxibelelana neVFS Global. Ukubhukisha ingqesho yeqela ngqo, endaweni yokugcina umntu ngamnye:
umnxeba: + 91 22 67866021
Ubhaliso kwi-Intanethi kunye nentlawulo
Ungabhalisa isicelo sakho kwisango lokufaka.
Ufumana isiqinisekiso se-imeyile emva kwe- inkqubo yobhaliso iyagqitywa.
Ikopi yefom yakho yesicelo kunye neleta yokubhaliweyo iya kuvela ngeposi eqhotyoshelweyo. Ileta yesicelo iyangqina ukuba uhlawule umrhumo wesicelo. Kuya kufuneka uprinte okuncamathiselwe kwi-imeyile. Kwaye emva koko ungenise kunye namanye amaxwebhu afunekayo.
Imali yesicelo seNorway visa yamaNdiya:
Umrhumo wee-visa ngama-euro angama-80. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emithandathu abahlawulwa. Abantwana abaneminyaka eyi-6 ubudala nangaphantsi kweminyaka eyi-12 bahlawuliswa umrhumo wevisa we-EUR 40.
Ngolwazi malunga amanye amaqela axolelwe kumrhumo wevisa, Nceda undwendwele UDI.
Nceda uqaphele ukuba uhlawula umrhumo ePortal xa ubhalisela isicelo. Imali iya kubuyiselwa kubenzi-sicelo abakhululweyo kwimfuno yokuhlawulwa kwe-visa.
Ukuba ufaka isicelo kwi EU / EEA ummi we-visa njengelungu losapho, awunyanzelekanga ukuba uhlawule umrhumo wesicelo.
Umrhumo weVisa yi-EUR 60 yabantu abadala kunye ne-EUR 35 yabantwana abaneminyaka yobudala eyi-6 ukuya kwi-12 UDI iwebhusayithi.
Xa ubhalisa isicelo kwi-Intanethi ePortal uya kuhlawula umrhumo wevisa.
Ngaphambi kokungenisa, qaphela ukuba umenzi-sicelo kufuneka atyikitye ileta. Kwakhona, nceda uqaphele ukuba uMzi woZakuzo unokuhlela naziphi na iimpazamo kule fomu. Awunyanzelekanga ukuba ufake esinye isicelo.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka uphathe wona?
Kuya kufuneka uze nazo:
Ukuprintwa kweleta yesicelo sePortal Portal kunye nefom yesicelo
Uluhlu lokutshekisha kunye namaxwebhu aboniswe kulo
Emva kokunduluka kwakho okucwangcisiweyo, incwadana yakho yokundwendwela kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezintathu.
Ifoto (kufuneka ihlangane imigangatho yamazwe)
Umgaqo-nkqubo wakho we-inshurensi wokuhamba:
Ubuncinci be-30 000 ye-euro kufuneka ikugubungele. Oku kubandakanya inkcitho enxulumene nokugoduswa ngenxa yezizathu zonyango. Unyango olungxamisekileyo lonyango kunye nonyango olungxamisekileyo esibhedlele kunye nokufa.
Inganceda ukuba unayo i-inshurensi esebenzayo kuwo onke amazwe aseSchengen
Kuya kufuneka igubungele ukuhlala kwakho konke okucetywayo kwindawo yaseSchengen
Njengomthetho, kufuneka uthengwe kwilizwe lakho. Ukuba oku akunakwenzeka kwelinye ilizwe, kunokuthengwa.
Iqhubekeka nexesha leVisa eNorway
Ixesha lokulungiswa kwezicelo ukuya kwiintsuku ezili-15 zekhalenda. Emva kokuba umzi wozakuzo okanye umzi wommeli welizwe efumene isicelo. Ngamanye amaxesha, izicelo zithunyelwa kwiCandelo loPhamblo (i-UDI). Kwaye kwezo meko, ixesha lokuqhubekeka linokufikelela kwiintsuku zekhalenda ezingama-45.
Funda ngakumbi malunga nexesha lokuqhubekeka kwe-visa kwimeko UDIs iphepha lasekhaya.
Faka isicelo kwangaphambili ngaphambi kokuba uhambe
Sicebisa ukuba ufake isicelo ubuncinci iiveki ezine ngaphambi kokumka. Isicelo sakho sinokubhaliswa kwiinyanga ezintathu ngaphambi kohambo olucwangcisiweyo.
Ixesha lokuphathwa kwetyala linenombolo yeentsuku ezili-15. Ukusuka kwisicelo uMzi woZakuzo waseNorway eNew Delhi ufumana. Kuyo, ikhuriya kwindlu yozakuzo iyayithatha.
Ke nceda ukhumbule ukuba ngenxa yekhuriya phakathi kweendawo. Rhoqo inani leentsuku ude ufumane isigqibo sakho lingaphezulu kweentsuku ezili-15. Amaxesha aya kwahluka ngokuxhomekeka kwindawo.
Ixesha lokulungiswa kweVisa eIndiya
Delhi: Nceda uvumele ezinye iintsuku ezimbini ngaphandle kweentsuku ezili-15 zokuphatha.
Chandigarh, Kolkata, Ahmedabad, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Pune, nase Bangalore:
Vumela ezinye iintsuku ezi-4 ukuya kwezi-6, nceda.
Kuya kufuneka ubonise oku kulandelayo xa uwela umda uye kwindawo yaseSchengen:
Ipasipoti yakho yokundwendwela yeVisa.
Ubungqina bokuba unayo imali eyoneleyo (umzekelo, imali ezinkozo okanye ikhadi lebhanki letyala) ukuze uzixhase xa uhleli. Ukuba unayo ifom yesiqinisekiso, kuya kufuneka uze nekopi yayo.
Amaxwebhu abonisa injongo yotyelelo lwakho, umzekelo, isimemo, ukubhukisha ihotele, njl.
Itikiti lokubuya okanye uhambo olujikelezayo ukuba undwendwela indawo yaseSchengen ngenxa yezokhenketho okanye izizathu zabucala
Igosa lolawulo lomda linokucela ukuba ubonelele ngeminwe. Kwimeko apho, xa ufaka isicelo sephepha-mvume lokundwendwela, oku kuyakuthelekiswa neminwe oyinikiweyo.
Ungahamba ngokukhululekileyo ngaphakathi kwendawo yaseSchengen okoko i-visa yakho isemthethweni. Okanye kumazwe aphathwe nge-visa aphethwe yi-visa. Umzekelo, ukuba ushiya indawo yaseSchengen utyelele i-UK okanye iSvalbard, uyakufuna i-visa yokungena emininzi.
I-visa yabafundi baseNorway yabafundi baseIndiya
Amanyathelo aphambili okuthatha i-visa yabafundi eNorway
Nantsi into ekufuneka yenziwe ngabafundi baseIndiya ukufumana i-visa yabafundi yokufunda eNorway:
ukusebenzisa i-UDI yesicelo sePortal ukubhalisa isicelo sakho. Hambisa amaxwebhu anxulumene nesicelo sakho. Nika i-biometric kwiziko elikufutshane kwilizwe lakho lesicelo sevisa.
Mhlawumbi abafundi baseIndiya baya kudinga ukubonelela ngebhayometri ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo sevisa. I-biometric yakho isetyenziswa ngamazwe ngeenjongo zokhuseleko ukuchonga ezongezelelweyo.
Ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo, kuyakufuneka uye kudliwanondlebe lwe-visa.
Imvume yokuhlala eNorway yeziFundo isebenza ngokusemthethweni ukuya kuthi ga ekhosini. Kuya kufuneka uhlaziye i-visa yakho minyaka le ukuze uhlale kuyo yonke inkqubo yakho yesidanga.
Masithi unqwenela ukuhlala eNorway emva kokugqiba isidanga sakho. Kuya kufuneka ufake isicelo kwi-ofisi yokufudukela kwelinye ilizwe i-visa eyahlukileyo okanye uhlaziyo lwevisa.
Ndifumana malini ukuhlawula i-visa yabafundi?
Kuya kufuneka uhlawule umrhumo we- € 556 ukufaka isicelo semvume yokuhlala eNorway kwiZifundo. Amagunya aseNorway aya kukuvumela ukuba uhlawule loo ntlawulo kwi-intanethi. Kuxhomekeka kwimeko yakho, ungahlawula umrhumo kwiziko lesicelo sevisa eIndiya okanye ngokudlulisa ibhanki.
I-visa yaseNorway ayizukufuna ukuba abafundi baseIndiya bafumane i-inshurensi yezempilo.
Umrhumo wokuqhubekeka kweevisa zabafundi yi-21 EUR.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukuze ndifumane i-visa yomfundi?
Xa ufaka isicelo sephepha-mvume lokundwendwela, kufuneka ubonise ukuba uyakwazi ukuzixhasa ngexesha lokufunda. Kuya kufuneka ubonise ukuba unayo imali eyaneleyo yokuhlala eNorway eNorway. Ixabiso lokuphila yi-EUR 12211 ngonyaka nokuba ivela kumthombo ongaphandle okanye sele ikwiakhawunti yakho yebhanki.
Abafundi baseIndiya akuyi kufuneka bangqine ukuba bathetha isiNgesi ngokwaneleyo. Ezi zakhono zolwimi ziqinisekisa ukuba iiklasi zakho ziyachuma.
Abafundi baseIndiya abayi kucelwa ukuba bathathe uvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuba bafike eNorway.
I-visa yeshishini laseNorway yamaIndiya
Kumadoda oShishino lwamaIndiya
Ezi nyaniso ziphambili zilandelayo zezi:
(i) IsiNgesi siyaqondakala kuninzi lwamashishini aseNorway.
(ii) Abandwendweli e-India kufuneka babe ne-visa eyi-Schengen yokungena eNorway.
(iii) Umzi woonozakuzaku baseNorway bahlala eNew Delhi kunye noMmeli waseMumbai.
iv) Imibuzo kunye nokuhamba-hamba. Nxibelelana noZakuzo nge-imeyile:
Ngeendlela ezininzi, iNorway inokwazi ukuba liqabane elihle koosomashishini baseIndiya. Isizwe sinoqoqosho oluphikisa iingcinga ezikhohlakeleyo. Nangona i-European Union ingelilo ilungu, ikwiNdawo yezoQoqosho yaseYurophu.
Olu luqoqosho oluhambele phambili, kodwa luxhomekeke ekuthengisweni kwezinto zorhwebo kumazwe angaphandle:
INorway lelinye lawona mazwe athumela kumazwe angaphandle ioyile kunye nerhasi yendalo kwihlabathi liphela. Malunga. Izigidi ezi-5.2 zabemi baseNorway banandipha ingeniso yomntu ngamnye. $ 82.711 (ngegama) ngonyaka; $ 74.065 (PPP).
Intlawulo yokufaka isicelo seVisa yaseNorway yamaIndiyaI-visa yeshishini laseNorway yamaIndiyaI-visa yabafundi baseNorway yabafundi baseIndiyaIsicelo seVisa saseNorwayI-visa yaseNorway yamaNdiyaI-visa yaseNorway yabatyeleli yamaIndiya
IVisa yaseKenya yamaIndiya
Amazwe asimahla eVisa eJapan